တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Nguyen Quoc Dung အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Nguyen Quoc Dung အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး H.E. Mr. Nguyen Quoc Dung အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong၊ စစ်သံမှူး Colonel Nguyen Duc Giang နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာများ နှင့် စစ်ဘက်နည်းပညာ များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိုလည်း ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် ဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စများအား အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ စာနာ နားလည်စွာ ရပ်တည်ထောက်ခံနေမှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လ ၂၁ ရက်နေ့ တပ်မတော်၏ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှ ထောက်ခံကြိုဆိုမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေးအတွက် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ သည်အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၊ ဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးကိုယျစားလှယျဖွဈသူ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး H.E. Mr. Nguyen Quoc Dung အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၊ ဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးကိုယျစားလှယျဖွဈသူ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong၊ စဈသံမှူး Colonel Nguyen Duc Giang နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာမြား နှငျ့ စဈဘကျနညျးပညာ မြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိသကဲ့သို့ ကာကှယျရေးနှငျ့လုံခွုံရေးဆိုငျရာမြားကိစ်စရပျမြား ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးကိုလညျး ပိုမိုတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျရနျလိုအပျမှုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးဒသေတှငျ ဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ့ ဘင်ျဂါလီအရေးကိစ်စမြားအား အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ဖွရှေငျး ဆောငျရှကျနမှေုမြားအပျေါ နိုငျငံတကာအလယျတှငျ ဗီယကျနမျနိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ စာနာ နားလညျစှာ ရပျတညျထောကျခံနမှေုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ပွညျတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးရရှိအောငျ ဆောငျရှကျလကျြရှိသကဲ့သို့ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး ဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးကိုလညျး ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ လ ၂၁ ရကျနေ့ တပျမတျော၏ထုတျပွနျခကျြအပျေါ ဗီယကျနမျ နိုငျငံမှ ထောကျခံကွိုဆိုမှု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ပွညျတှငျး ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျတှငျဗီယကျနမျနိုငျငံက ကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးတကျခိုငျမာစရေေးအတှကျ ခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျမှု ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ နှဈနိုငျငံ ကုနျသှယျမှုတိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးရငျးနှီးနှီးဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈ သမ်မတနိုငျငံ၊ ဝနျကွီးခြုပျ၏ အထူးကိုယျစားလှယျဖွဈသူ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတို့ သညျအမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။